hambalyo diiran on marayay RoHS Certification of waxyaabaha our shirkada ee
waqti Post: 05-09-2017
Si loo horumariyo shuruudaha tayada alaabta suuqa caalamiga ah, wax soo saarka qaab waaxyihiisu farsamo ee Shirkadda ayaa dhowaan si guul leh ku aflaxin imtixaanka Delixi RoHS, oo waxay u gudbeen imtixaanka for jirrabo kala duwan ee sida amniga, ilaalinta deegaanka, nadaafadda, iwm, w .. .Read more »
Maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee Hong cusub?
waqti Post: 09-02-2016
Company waxyaabaha ugu muhiimsan: cilmi madax banaan iyo horumarinta AC contactor (guud AC iyo DC, heerkulka hooseeya iyo isticmaalka awood yar yahay oo waafaqsan heerka Euro 2); wiishka contactor gaar ah anti dayrta (xiddiga xiran); dhibic biyo biyo kululeeyaha contactor gaar ah. contactor AC dhaqanka, DC ...Read more »
Our network iibka
Waxaan ku tiirsan yihiin tayo wanaagsan iyo adeeg ka dib-iibka kaamil ah, in industry ee uu leeyahay sumcad badan, waxa uu noqday qeybiyaha loo qoondeeyey ee shirkadaha badan. Read more »
saaraha contactor Professional
products waa tayo sare oo dhan iyo in ka badan xirfadeed Read more »
falsafada Business of Yueqing cusub Hong Electric Co., Ltd
falsafada Business: baahida macaamiisha kexeeyey, R & D iyo wax soo saarka oo tayo sare iyo wax soo saarka qiimo jaban. Read more »
Learning, hal-abuurnimo, daacadnimada, furitaankii Read more »
horumarka taariikhiga ah ee contactor AC
waqti Post: 08-29-2016
1950, Midowgii Soofiyeeti ee hore, heerka of 30-40, mugga weyn, sahayda, isticmaalka tamarta, ARC weyn, nolosha hooseeyo, ku dayashada ugu muhiimsan: QC1, QJ1. 1960, jiilka koowaad ee design saarka midaysan, mugga sahayda si loo yareeyo 1 / 3-1 / 2, cimri kordhay 2-3 jeer, m ku ...Read more »